musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » avhiyesheni » Vanhu 4 vakaurayiwa mutsaona yendege yeConnecticut
Airlines • avhiyesheni • Kuputsa Kufamba Nhau • nhau • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Tourism Kutaura • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Vanhu vana vaive mungarava, vanonzi ndeye Cessna Citation bhizinesi jeti, maererano neruzivo kubva kuFederal Aviation Administration (FAA).
Ndege yakarova muchivako cheindasitiri muConnecticut.
Vanhu vese vari mungarava yeCessna Citation bhizinesi jeti vakaurayiwa mutsaona.
Vanodzima moto vemuno vari kugadzirisa moto wakatanga netsaona.
Vanonunura zvikwata muFarmington, Connecticut vari kurwira moto pachivako chemabhizimusi chemuno chakatanga mushure mekunge jeti rebhizimusi reCessna Citation rovera muchivako neChina mangwanani, sezviri pachena kuuraya vanhu vana vari mungarava.
Dhipatimendi reMapurisa reFarmington rakasimbisa kuti ndege yakarovera muchivako chiri paHyde Road, ndokuti paTwitter kuti vezvekukurumidzira vaive pasi vachishanda kuti "vabudise nzvimbo iripedyo".
Vanhu vana vaive mundege, vanonzi vaive Cessna Citation bhizinesi jeti, maererano neruzivo kubva ku Federal Aviation Administration (FAA). Hapana chimwe pane zvina chinofungidzirwa kuti chakapona.
Vanhu vana vaive mungarava, vanonzi ndeye Cessna Citation bhizinesi jeti, maererano neruzivo kubva kuFederal Aviation Administration (FAA). Hapana chimwe pane zvina chinofungidzirwa kuti chakapona.
Sekureva kwemapurisa eFarmington, pakange pasina kukuvara kwakataurwa mukati mechivako ichi, icho chiri chemugadziri wezvigadzirwa weGerman Trumpf.
Mumifananidzo yakagovaniswa kubva pachiitiko pane vezvenhau, hutsi hunogona kuoneka huchibva panzvimbo yetsaona, nevadzimi vemoto vachitarisa moto wakakura wakabuda kubva muchikamu chimwe chechivakwa.
Farmington iri muConnecticut muHartford County, angangoita mamaira gumi (10km) kubva kuguta guru renyika.